Ifama entle kufuphi nolwandle, iMatsalu National Park - I-Airbnb
Ifama entle kufuphi nolwandle, iMatsalu National Park
Saastna, Lääne maakond, Estonia
Ifama sinombuki zindwendwe onguSigrit
Indlu yam esehlotyeni ikwikhilomitha eziyi-120 ukusuka kwikomkhulu, iTallinn kufutshane nolwandle lweBaltic kwilali encinci ebizwa ngokuba yiSaasta eMatsalu National Park. Yindawo efanelekileyo yokuba abantu abathanda indalo batyelele, babuke baze bayonwabele. Ukubukela iintaka, ukuhamba ngebhayisekile, ukunyuka intaba okanye ukubona nje ubuhle befama endala. Ikwayindawo entle yokuhlala uze uthathe uhambo lwemini oluya eSaaremaa, ePärnu okanye eHaapsalu. Yiza uhlale uze umncede agcine iphupha lakhe:)
WAMKELEKILE kwifama YE-SARAPUU!
Ibali lomama wethu
Umama wethu yintombazana esuka kwisixeko esikhulu, eyayifike kwiminyaka eyi-61, yaphupha ngendlu yakhe esemaphandleni.
Ngoku, eli phupha liye labonwa ngovuyo, ubunzima, kunye nobuhlungu, kwaye ulivuyela kakhulu ixesha lakhe kwikhaya lasehlotyeni elitofotofo. Eyona nto imnandi ngomama wethu kukuhombisa ngaphakathi, ibe umntu usenokukrokrela, xa ejonga egumbini. Uye walungisa waza wafanisa ikhaya lakhe lasehlotyeni ngothando nangomfutho wokwenyani.
Umama wethu unabantwana aba-3, oomakhulu abayi-6, ikati nenja.
lefama I-Sarapuu Farmstead yakhiwa ngo-1929 kwaye abahlali bayo bokuqala yayiyintsapho yabalobi.
Abafana ababini bahlala apho neentsapho zabo ngexesha leSoviet. Umama wethu waqala ukubuyisela indlu kwiminyaka eyi-10 eyadlulayo.
Yayikade isetyenziselwa ukuchitha umhlala-phantsi nomyeni wakhe othandekayo kodwa, ngelishwa, ukuphela kwayo yayinocwangciso olwahlukileyo... Ngoku umama wethu uqhubeka enomsebenzi wakhe wempilo yedwa, encedwa ngabantwana bakhe.
Zonke iindwendwe zethu ezixabisekileyo zinegalelo ekulungiseni indlu, yonke ingeniso evela kwiindwendwe zethu ijongene nokuphucula indlu okanye, ukuyifaka ngenye indlela, ukuzalisekisa iphupha likamama wethu.
Enkosi ngokuba lundwendwe lwethu kwaye ube neholide emnandi!
Indawo ekufutshane yokuqubha sisibuko esidala esikumgama weekhilomitha eziyi-.
Indawo ekufutshane enabantu abaninzi yi-Lihula.
Ivenkile encinci ekufutshane iseTuudi, ekumgama oziikhilomitha eziyi-14.
Eyona venkile inkulu ekufutshane yi-Lihula, ekumgama weekhilomitha eziyi-20.
Izinto onokuzenza kunye neendawo onokuzibona
I-Matsalu National Park
i-Matsalu National Park igubungela i-Matsalu Bay enzulu, eneziqithi ezimalunga ne-50 neziqithi, kunye nolwandle olujikelezileyo i-Väinameri (uLwandle lwe-Straits). Yiparadesi yokwenene yabathandi beentaka kunye nenye yezona ndawo zibalulekileyo zaseYurophu zokufuduka kwamanzi phakathi kweArctic neNtshona Yurophu.
Inkcazelo engakumbi ngeMatsalu National Park:
I-Ranna ranch kunye neendawo zokuhlala izilwanyana zasefama.
Indawo ebangel 'umdla yokuhamba nabantwana ukuze ubone iibhokhwe, iiponji, amahashe, iikati, izinja, iidada, ii-geese njl.
I-Saastna Village Saastna ilali
ise-Lihula Parish, Läänemaa. Abantu abamalunga ne-35 bahlala kwilali.
Eyokuqala ikhankanya ilali yaseSaastna ukususela kunyaka ka-1320. (Sastrennenne). I- (ngoku yonakalisiwe) iSaint Olav yayiyindawo yokutyelela iEstonian-Swedes neGotlanders. Kukho namabhodlo endoda endala yenkulungwane ye-17 kwilali yaseSaastna.
Kufuphi nelali iSaastna, kukho induli enamatye ekuthiwa yiPorimägi (intaba yeMud). Abantu bathi uIngvar, inkosi yaseSvealand owafa ngexesha lokuxhatshazwa kweLäänemaa ngenkulungwane yesi-7, ungcwatywe apho. Kodwa kukho ezinye iinduli eziliqela kwenye indawo ebizwa ngokuba ngamangcwaba aseIngvar.
Kwigadi yendoda endala kwilali yaseSaastna kukho iSaastna nõiamänd (iWitch 's pine). I-pine ejikiweyo nekhulayo iphuma kweminye imithi kuba yiyo yodwa phakathi kwemithi evulekileyo. Le pine inobude obuziimitha eziyi-15 kuphela kodwa ineminyaka engaphezu kweyi-100, okanye ngaphezulu. I-pine ikhankanywe njengomthi ophilisayo kumanqaku ezigciniweyo zemyuziyam yeencwadi. Ngo-1939, abantu basekuhlaleni bayibiza umthi ngepine ejinga nenja. Igama elingaqhelekanga elivela ekukholelwa ukuba lo mthi uncedile ekuphileni ii-carbuncles nezinye izigulo zolusu.
Unxweme lweSaastna lunamatye amaninzi. Elona xabiso likhulu lawo lilitye elibizwa ngokuba yiNärikivi (umjikelo weemitha eziyi-14.5, ukuphakama kweemitha eziyi-3).
Umbuki zindwendwe ngu- Sigrit
Kusoloko kukho umntu ojikelezileyo okanye ofikelelekayo ngefowuni okanye ngomyalezo.